Karman Wiricheya Chitoro | Yakakura kwazvo Manual Wheelchair Brand
BEST WHEELCHAIR BRAND NEMAHARA SHOKO KUSHURE KUSVIRA 1994
Kugadzira uye Kurapa Kupa Online Chitoro: Mawiricheya, Kurema, Kupepuka, Simba Rakamira, Chinyorwa Mawiricheya, Kutakura Mawiricheya, Magetsi Mawiricheya, Vanotenderera, Vanofamba uye Inoshanda Mawiricheya kutumirwa zvakananga kwauri. Zvakare, yakanaka wiricheya inofanirwa kugadzira upenyu hwako nyore. Naizvozvo, isu tine hunyanzvi mu ergonomics uye isina huremu. Kunaka kuburikidza Mobility kuzvipira kwedu kwauri! Tenga izvozvi uye chengetedza!
KN-TV10A - 14.9 LBS KUFAMBA WHEELCHAIR
Ultra Lightweight Mawiricheya
Kutenga yedu hwiricheya Chitoro - Wiricheya isingaremi
PaKarman, isu tine anopfuura zana mamodheru echinyorwa Mawiricheya kusarudza kubva. Pakati pese, kana iwe uchikwanisa kuzvimhanyisa iwe muvhiri-cheya, iwe uchazoda yakanyanya kureruka kugadzikana-vhiri-cheya inowanikwa. Dzidza zvakawanda nezve ese mapoka aripo wobva wasarudza nehuremu hwechigadzirwa uye bhajeti. Zvigaro zvese zvinogadzirwa zvakasiyana. Saka, ivo vese vakasarudzika munzira yavo. Kutenga chigaro cheKarman kwakafanana nekutenga tsika chair. Isu tine yakasarudzika sarudzo kubva kune chero chitoro. Ngatitangei mukutarisa. Heano mamwe mapoka uye ruzivo rwekuongorora kwako:
Yekutakura mavhiri-zvigaro ndiyo sarudzo chaiyo yekutakura mumwe munhu kuenda uye kubva kunzvimbo dzaungade kufamba nadzo. Zviri nyore. Naizvozvo, tt mwenje uye nyore kuchengeta. A chokufambisa vhiri-cheya inowanzo derera uye kupenya kupfuura a standard vhiri-cheya, Ichiita sarudzo yakanaka yezvipingamupinyi zvakaomarara uye nzira dzakamanikana. Zvinotarisirwa seyero yekupinda yemacheya achienzaniswa nehukuru "hwakazara". Pane misiyano pakati pemagumo edu epamusoro Tsaona Yakaedzwa S-ERGO akateedzana kutakura mavhiri-zvigaro uye zvakare hupfumi zvigadzirwa giredhi. Dzimwe sarudzo huru dzinosanganisira yedu ERGO LITE uye S-115TP. Isu zvakare tine vhiri-cheya-cheya yakagadzirirwa kufamba, TV-10B.
Kurema Kurema Wheel-cheya
Mazhinji akajairika uremu-mavhiri-magaro anotanga pa34 mapaundi. Izvi zvingave standard weght vhiri-cheya. Iyi sarudzo hombe kana iwe uchida vhiri-chigaro chisingazoshandiswe kazhinji. Kazhinji, maawa matatu kana mashoma pazuva uye nekuchinja kusingawanzo kuitika. Iyi ingave iri mhando yaunoona kuairport kana kuzvipatara. Chekupedzisira, hapana mafrills uye chimwe chinhu chakakosha. Izvo zvakarairwa nachiremba. Yedu yakazara sarudzo inowanikwa kubva kune akanyanya mhando mamodheru ane akamisikidzwa legrests uye armrests kusvika Mawiricheya izvo zvine sarudzo yekusimudza magaro emakumbo uye mabhuremu anobviswa. Isu tinopa zvipatara uye nhandare saka usasimudzwa kana ukaona imwe ipapo. Dzimwe nguva chigaro chekutanga ndizvo zvese zvaunoda. Kunyanya kana chiri chidimbu chenguva pfupi. Kune zvakare mamodheru ane zvimwe zvekushandisa zvekusimudzira yako vhiri-cheya. Maputi efuro uye / kana Gel Makushoni kupa kune imwe nyaradzo.
Uyezve, nezviyereso zvakatangira pa25-34 mapaundi, yedu lightweight vhiri-cheya isarudzo huru kana iwe uchida vhiri-cheya iro rinonyanya kushandiswa, kana iwe uchida sarudzo dzakasarudzika, kana kana iwe uine moyo wako wakaiswa pane yakatarwa furemu uye / kana upholstery ruvara musanganiswa. Ichi chikamu chinozvifukidza zvese, nehuremu-mavhiri-zvigaro pamakwikwi mitengo. Kubuditswa neizvi, aya mavhiri-magaro anopa zvimwe zvingasarudzwa uye isu tinowanzokurudzira kuti fananidzo iitwe neinotevera nhanho kumusoro chikamu icho chiri chedu ultralight uremu vhiri-zvigaro uko kwekupedzisira Mobility zvishandiso uye maficha ari pakanyanya kwazvo.
Uye zvakare, ichi ndicho chikamu chemavhiri-zvigaro panogara akanakisa ezvakanakisa. Iine mavhiri-cheya-cheya anorema zvakaderera se14.5 mapaundi uye anowanikwa mune ese ari maviri S-ERGO uye zvakapusa mhando dzakasununguka dzakasununguka. Naizvozvo, ultralight uremu vhiri-cheya ndeye yemushandisi wenguva yakazara uyo anoda kushanda uye kune avo vanoda iyo yakareruka vhiri-cheya inogoneka yekureruka kwekuzvifambisa uye kutakura. Muchikamu ichi, iwe unenge uine huwandu hwezvinhu zvisati zvawanikwa pane chero vakwikwidzi senge standardize tsaona bvunzo pa S-ERGO mhando uye matani e sarudzo uye zvishongedzo isina kupihwa pane mamwe mabhesi ezvikamu mune vhiri-cheya sarudzo.
S-ERGO ATX inopa yakanakisa mukubatanidzwa kwevhiri-cheya-yekugadzira ekuraira. Nekudaro, aya ma criterias anosanganisira asi haagumiri kune ekugadziriswa zvakanyanya, kuomarara, kupepuka, kureruka, kupeta, chimiro uye kuita kwakanyanya. Yedu ultra lightweight vhiri-chigaro chikamu chinotora zero kubvumirana nedhipatimendi redu reR & D kusundira zvazvino zvigadzirwa zvekugadzira uye kugona uye kuzvimisikidza kwauri chaiko mumigwagwa. Muchidimbu, seye pamusoro pesarudzo sarudzo, tanga pano. Kana iwe uchitsvaga akanakisa, ino inzvimbo chaiyo nzvimbo yekutanga.
Kurereka / Kudzikama Gumbo-chigaro
Kudzokera kumashure kana kuti zvimwe kuzivikanwa se "musana wepamusoro" hwiricheya iri sarudzo hombe kune avo vanopedza yakawanda yenguva yavo muwiricheya sezvo ichipa zvimwe zvinzvimbo zvekugara. Uye a kurereka-chigaro inopa kumwe kumisikidza uye kumanikidza kuregererwa kune avo vari kuda kumanikidzwa kumanikidzwa kwekushandisa kwenguva yakareba kwea hwiricheya. Chaizvoizvo, ese mapoka edu akanyatso kuderedza huremu hwevakwikwidzi vechinyakare. Ipapo, ita shuwa yekuchengeta izvi mupfungwa kana uchitenga pamutengo. Zvinhu zvekuvhenekesa senge ndege yegiredhi aluminium ndizvo zvatinoshandisa.
Heavy Duty Wheel-cheya
Bariatric Wheel-macheya ane yakanyanya kurema kapu yemazana mazana mapaundi, aya rinorema basa vhiri-zvigaro inogona kugara chero chero mushandisi ane yakanyanya chigaro upamhi of 30 ″ paupamhi. Karman anotakura yakazara yakazara ye basa rinorema Mawiricheya, kubva pane zvemari bariatric kutakura mavhiri-zvigaro, kuti yakaoma zvikuru-inogadziriswa / echinyakare mamodheru. Isu zvakare tine yakareruka kurema bariatric vhiri-chigaro muindastiri kune chigaro chayo hupamhi uye huremu chivharo.
Kumira pawiricheya-chigaro ndechimwe chezvinhu zvine simba zvigadzirwa zvatakagadzira nekugadzira mukuedza kwedu kubvumira iyo Mobility vasina simba kutora hupenyu hwavo kudzokera mumaoko avo. Zvisinei, hatina kumira nekungobvumira vanhu kumira muwiricheya; isu takaita kuti ive inokwikwidza zvakanyanya mutengo chigadzirwa muchikamu chayo kutyaira hupfumi kupinda mazuva ese imba inobata. Zvakadaro, verenga zvakawanda pane zvese zvinobatsira, masosi emari, uye sarudzo dzemari kana iwe uchifarira vhiri rako-cheya rinokubatsira kumira. Iwe fara kuti wakazviita. Kana tarisa yedu youtube vhidhiyo. Tine indepth chigadzirwa wongororo. Isu tinewo zvakapusa ongororo pamusoro pavo futi.
Ndeipi nzira yekutenga vhiri-cheya kubva kuna Karman?
Une nzira dzinoverengeka dzekutenga vhiri-cheya kubva kwatiri. Zvichienderana nechigadzirwa, unogona kutenga chero kubva ku mutengesi wezvidhinha uye wedhaka, kana online. Zviri kwauri. Chengeta zviri nyore. Unogona kusarudza kubva kune chero vatengesi vedu vewebhusaiti vakaita seAmazon kana maWalgreens, kana unogona kutenga zvakananga kubva kune ino webhusaiti. Mushure mezvose kutenga kubva kumutengesi kunogona kuve chiitiko chiri nani pane kungo online. Kana zvinopesana.
Karman ndiye mutungamiri wenyika anotungamira Mawiricheya
Karman Healthcare anga ari mugadziri anotungamira mukugadzira uye kugovera zvigadzirwa zvekurapa kumba kubvira 1994. Tine mamwe emacheya akanakisa. Nekuda kweizvozvo, Karman anopa yakazara mutsara wesimba uye manyore Mawiricheya, Vanofamba, rollators, & scooter, oksijeni zvinodzora, chengetedzo yekugezera uye zvimwe zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba. Naizvozvo, tenga izvozvi uye chengeta! We dzidzira ose marudzi Mobility zvigadzirwa. Yedu Mawiricheya inokupa iwe chiitiko chisina kufananidzwa nemakwikwi. Taura nevashandi vedu vane ruzivo nhasi kana iwe uine chero mubvunzo kana zvinonetsa. Tsvaga kuti nei edu epamutemo ergonomic zvigaro ari maindasitiri anotungamira matsva ekunyaradza!
Chinyorwa uye Simba Kumira Mawiricheya
Karman® inopa anopfuura zana zana mamodheru e Mawiricheya yaunogona kusarudza kubva. Semutungamiri muindastiri, isu tinopa dzakasiyana siyana Manual Wiricheyas, kusanganisira Kutakura Wiricheyas, Wiricheya Yakajairwas, Wiricheya isingaremis, Ultra Lightweight Wiricheyas, Ergonomic Wiricheya uye zvakawanda. Naizvozvo, isu tiri pano kune ako ese Mobility zvinodiwa. Kusarudza chikamu, modhi, ruvara kana kunyange mutengo poindi kwakakosha kune wekupedzisira mushandisi kuti anyatsonzwisisa yedu "mamiriro eunyanzvi" Mobility zvigadzirwa. Usakanganwa kutarisa yedu patent S-ERGO S-Rakaumbwa Seating System. Takazvipira kutsvaga ou chigaro chakakwana. Nekuda kweizvozvo, isu takatsaurirwa kune yako Mobility zvinodiwa. Tarisa uone yedu Kumira Wiricheya uye yazvino tech. Tsvaga cheya chepamusoro pane zvako zvaunoda.
Wiricheya Kudzosera Zvikamu